ul အတည်ပြု4layer RoHS Compliant Blue Ink Rigid PCBs multi-layer boards. - တရုတ် ul �အလွှာ RoHS ကိုက်ညီအပြာရောင်မှင်တင်းကျပ် PCBs Multi-layer ကိုပျဉ်ပြားPCBs multi-layer boards. ကုန်သွင်းသူ,စက်ရုံ -WMD
105*95မီလီမီတာ / 1PNL
4အလွှာ FR4.031 ကြေးနီ 1Oz အပြာရောင်အဖြူရောင်ဒဏ္ဍာရီဇာတ်လမ်းများအ Finish ကို ENIG Mask. စံဘုတ်အဖွဲ့ မှလွဲ., ငါတို့သည်အချို့သောအထူး features တွေရှိတယ်, Hole မှတဆင့်များနှင့်တောင်ပေါ်မှာ Surface, BGA နှင့် µBGA နည်းပညာ, သင်္ဂြိုဟ်ခြင်းကိုခံ VIAS, မျက်စိကန်းသော VIAS, Pad ထဲမှာမှတဆင့်, LPI နဲ့အပူပိုင်းရုပ်ရှင်ပွဲတော်ဂဟေဆက်မျက်နှာဖုံး, Peelable ဂဟေဆက်မျက်နှာဖုံး, ကြီးပြင်းလာကိုယ်ရေးဖိုင်ပန်းကန်, sequential အလွှာပြုလုပ်ခြင်းနှင့်ထိန်းချုပ်ထားအနက်လေ့ကျင့်ခန်း / ပန်းကန် Capability, ထိန်းချုပ်ထား impedance, မြင့်မားသောအမြန်နှုန်း Epoxy / Teflon hybrid.
FR4 အကြီးစားကြေးနီ PCB 3OZ အမြင့် Temp TG170 ရွှေ Fingers 30u "PCB ဘုတ်အဖွဲ့.